La kulan: Halyayga lagu naaneyso Bogsiiyaha Lama-degaanka. | HimiloNetwork
La kulan: Halyayga lagu naaneyso Bogsiiyaha Lama-degaanka.
Posted by: Himilo in Wararka June 19, 2021	0 109 Views
MUQDISHO (HN) — Anand Dhawaj Negi, oo ahaa xisaabiye iyo qasnadhaye katirsan waaxda adeegga bulshada Hindiya ayaa ku guuleystay inuu bacad lama degaan ah ka dhigo keyn cagaaran.
Previous: La-yaab: Gabadhii 11 sano Ehelkeeda uga maqnayd Guriga Cid jaarkooda ah.
Next: Shirkad shaqaaleysiinaysa Dadka Cayilan.